Ballon D'or Waa Cadaalad Daro, In Uu Sergio Ramos Gaadho Iska Daaye, Kuma Riyoon Karo- Wargays Spain Caan Ka Ah Oo Weerar Ku Qaaday Virgil Van Dijk. - Gool24.Net
Ballon D’or Waa Cadaalad Daro, In Uu Sergio Ramos Gaadho Iska Daaye, Kuma Riyoon Karo- Wargays Spain Caan Ka Ah Oo Weerar Ku Qaaday Virgil Van Dijk.
Cid kastaaba kuma faraxsana waxa uu Virgil van Dijk samaynayo iyo guulaha uu gaadhayo kadib markii uu wargayska dalka Spain ka soo baxa ee AS uu weerar ku qaaday sida loo buun buuniyay xidiga reer Holland iyo kooxda Liverpool ee Van Dijk.
Warbixin lagu daabacay wargayska AS ee magaalada Madrid ka soo baxa ayaa si adag loogu dhaliilay Virgil van Dijk iyo waliba in loo saadaalinayo abaal marinta xidiga aduunka ugu fiican ee Ballon D’Or.
Wariyaha AS ee Joaquin Maroto ayaa si cadho wayni ku dheehan tahay uga hadlay sababta Van Dijk kubbada dahabka ah ee Ballon d’Or loogu saadaalinayo isaga oo aan samayn wax ka badan wixii uu Sergio Ramos soo sameeyay.
Joaquin Maroto ayaa sidoo kale ku dooday in Van Dijk aanu xataa ku fikiri karin in uu gaadho guulaha kabtanka xulka qaranka Spain iyo kooxda Real Madrid ee Sergio Ramos.
Van Dijk ayaa 12 kii bilood ee ugu danbeeyay waxa uu ku soo guulaystay koobabka Champions Leauge, UEFA Super Cup, abaal marinaha xidiga Yurub iyo England ugu fiican waxaana loo saadaalinayaa in uu ku guulaysan doono abaal marinaha xidiga aduunka ugu fiican ee The Best iyo Ballon d’Or.
Wariyaha AS ee Joaquin Maroto oo ka hadlaya in Van Dijk loo saadaalinayo Ballon d’Or balse aanu Ramos ku soo guulaysan ayaa yidhi: “Van Dijk haa, Sergio Ramos maya?. Aniga waxaa amakaag igi ah in kala badh aduunyadu ay ku doodayso in kubbada dahabka ah uu leeyahay Van Dijk”.
Wariye Joaquin Maroto oo hadaliisa sii wata ayaa yidhi: “Abaal marintan waxaa loo diiday Sergio Ramos kaas oo ayna tirooyinka difaaca Liverpool xataa ku riyoon karin in ay gaadhaan”.
Intaas kadib wariyaha wargayska AS ee Joaquin Maroto ayaa ku dooday in ciyaartoyda reer Spain ay Ballon d’Or ka eexatay wuxuuna yidhi: “Taariikh ahaan waxay kubbada dahabka ahi cadaalad daro ku ahayd Spanishka”.
“Iniesta kumuu guulaysan sanadkii uu South Africa koobka aduunka ugu soo guulaystay, waa wax aan la sharixi karin in Xavi aanu ku jirin, sidoo kale waxay taariikh ahaan cadaalad daro ku ahayd difaacyada”.